DEG DEG DAAWO: Dowlada Federaalka oo Dajisay Qorshaha Qabashada Axmed Madoobe - Allbanaadir Media | Allbanaadir Media
War laga helay laamaha Sirdoonka ee kahowlgala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in la keenay Liiska ay ku qoran yihiin magacyada xildhibaano, wasiiro, siyaasiin iyo taageerayaasha Axmed Madoobe ee katirsan Jubbaland, kuwaas oo la sheegay in ay safaro ku mari doonaan magaalada Muqdisho, iyagoo ku sii jeeda magaalada Kismaayo.
Liiska ayay wararku sheegayaan in ay ku jiraan siyaasiin caan ah oo maalmihii u dambeeyey si adag u taageeray dib u doorashada AXmed Madoobe, kuwaas oo hadda qorsheynaya in ay qeyb ka noqdaan Caleema-saarka Axmed oo dhici doona dhamaadka bishan September, waxaana dadaalka ay wado Sirdoonka Soomaaliya uu ku soo aadayaa waqti xasaasi ah.
Sidaas oo kale liiska waxaa ku jira wasiiro katirsan Jubbaland iyo Xildhibaanada dib loo doortay oo la amray in haddii ay yimaadaan Xabsiyada loo dhaadhiciyo, maadaama ay ka soo horjeedeen qorshaha dawladda Faderaalka Soomaaliya.
HALKAAN KA DAAWO XOG FAAHFAAHSAN
Talisyada ciidamada Xooga dalka iyo Booliska waxaa lagu amray in dhammaan xildhibaanada labada Aqal ee taageersan Axmed Madoobe doorashadiisii 22-ka August ee kusugan Muqdisho ay tahay in laga soo celiyo ilaalada hubeysan ee ka diwaangashan dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Xogtan oo ay heshay ALLBANAADIRMEDIA, waxaa ku jira in wareysi dheer lala yeesho cid kasta oo ka imaanaysa gobalada dalka, isla markaasna u socota magaalada Kismaayo, iyadoo si gaar ah loo beegsanaya siyaasiinta iyo xubnaha ka imaanaya dhinaca Puntland oo ay welwel ka qabto dawladda Soomaaliya.
Taabagalinta qorshahan ayaa ku soo beegmaya xili ay dawladda Soomaaliya dhawaan xirtay wasiirkii Amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xassan Nuur (Janan) oo ilaa hadda ku jira gacanta Sirdoonka Soomaaliya, waxaana la rumeysan yahay in ay talaabadan sii durjinayso xariirka labada dhinac.